Semalt Inopa Zvikonzero Zvishanu Zvisingabvumi Mutemo Wenhema Kubva Kwenzvimbo Yenyu
Iwe uri mutengesi anogutsikana kana muridzi webhusaiti uchishanda pakunatsiridza kutengesa kwako mari? Chishanu Chishanu ndeimwe yezuva rakanakisisa mugore rose iro rinogona kuita kuti kutengesa kwako kuwedzere. Nhamba dzinoratidza kuti mari inodarika madhora mabhiriyoni matatu ekutengesa yakanyorwa pamusoro pe Black Black 2016. Gore rino, mari yekutengesa inotarisirwa kukwira ku $ 3.36 mabhiriyoni, ichicherechedza 9,4% kuwedzera kana ichienzaniswa negore rakapera.
Gore negore, e-commerce websites inosangana nevashanyi vanopfuura mamiriyoni makumi maviri, apo 20% yevashanyi ndiwo mabhodhi uye tsvina dzewebhu - sigelei 100w plus vs ipv4 mod. Vose vatengesi vepanhau vanopa maintaneti paIndaneti vanoda kuda kuwana dambudziko rakachena uye rakarurama muGoogle Analytics nhoroondo.
Bhu rakaipa rinogona kukuvadza Black yako yeChishanu yekutengesa uye shandura injini yekutsvaga kugadzirisa maitiro ekutungamirira kusina kunaka. Bhuku rakaipa harina kukanganisa chizvarwa chemari uye kutengesa, asiwo kushanda kwebhizimisi dzeB2C neB2B dziri muIndaneti. Bhuipi dzakaipa, mukati mekutengesa, uye tsvina dzewebhu zvinogona kukukanganisa nhaurwa yako yeGoogle Analytics uye nhoroondo. Alexander Peresunko, the Semalt Mutevedzeri weMutengi weVatengi, anopa nzira shanu dzinotevera dzakaipa mabhizimusi anogona kuchinja yako yeVlack Friday kutenga nemari:
1.Indaneti dzisina kururama
Bhuku rakaipa rinoshanda kuti rive nehana yeG data yako nekusvibisa motokari inotungamirirwa panzvimbo yako. Mukufamba kwenguva, inowanzova yakanyanyisa kusiyanisa mhando chaiyo uye yakaipa pawebsite yako yeGoogle Analytics dashboard. Kusanzwisiswa kwemashoko pamashoko ako eGGA kunogona kukutungamirira kuita zvisarudzo zvisina kunaka zvebhizimisi. Usabvisa bot traffic kubva kune yako data uchishandisa GA zvigadziriswa kuti urege kutambura nekudonha kukuru paIni Black Friday kana uchienzanisa negore rakapera..
2.Ichiitiko chinoshandiswa nemushandisi
Bhomba dzakaipa dzinoshandisa e-commerce mawebsite zvakashata nekuderedza basa ravo rose. Iyi mamiriro ezvinhu anowanzova nemigumisiro inoshandiswa nemushandisi anotsvaga shure shure kwekushanyira mapeji nekurumidza kunonoka. Mukufamba kwenguva, vashanyi vanokoka kune mamwe mawebhusayithi kuti vapedze kutenga.
Kirasi kusiyiwa yakange iri imwe yenzira dzinokosha dzinoshandiswa neBob kutsvaga vatengi vechokwadi uye vashanyi kune mawebhusayithi ane njodzi. Bhuipi dzakaipa dzinoshandiswa kuti dzitsive dzimwe mirairo pamitikidziro kudzivirira vashanyi vakakodzera kubva pakuwana zvigadzirwa chaiyo. Motokari dzeMweya dzinogona kukuvadza zvakashata zvekutsvaga kwako kwekutsvaga kweChishanu Friday uye yekuwana mari Usarega mabhoti akaipa achitora izvi kubva kwauri. Dzoka Darodar uye ugoita zvekutengesa kubva panzvimbo yako yekutengesa e-commerce nekuwedzera firiji itsva panzvimbo yako.
4. Fake motokari
Bot, traffic, mukati megwagwa, uye nzira isina kunaka inogona kukuvadza kusvibisa yako Black Friday sales. Iyi mazita edzimba dzepawebsite uye vadzidzisi vekutengesa kuti vatende kuti motokari inotungamirirwa kune nzvimbo dzavo ndeyechokwadi. Vafiniti vepaIndaneti vanofanira kutarisa kuti vasabhadhara madhora emotokari inokonzerwa nevakaipa bots.
5. Operational tiredness
Bot motokari inomiririra kupfuura 58% yemotokari paIndaneti. Yakagadzirwa mumugwagwa wepakati uye bhoti rinogona kuputsa webhusaiti yako mumaawa ekure. Bot kutengesa kunogona kukonzera kupera kwemadhora nenguva. Ita zvakawanda zvekutengesa uye nemari muNhamba Dzenyu yeChitatu nekudzivirira chitarisiko chisingadiwi kubva pawebsite yako.
Bot motokari inogona kukanganisa marashiro ako ewebsite nekukura. Kuvimbisa kuti iwe unopedza data yakachena uye yakajeka paGoogle Analytics yako inokosha zvikuru. Dzivisa kuita zvikwereti zvisingabatsiri kune spammers nekusaisa chitengesi chekunyengera pawebsite yako.